“ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ မနှစ်က ရေဘေးအလှူ လှုပ်ရှားမှု သမင်လည်ပြန်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Ideas & Plans » “ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ မနှစ်က ရေဘေးအလှူ လှုပ်ရှားမှု သမင်လည်ပြန်”	5
“ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ မနှစ်က ရေဘေးအလှူ လှုပ်ရှားမှု သမင်လည်ပြန်”
Posted by Swal Taw Ywet on Apr 26, 2016 in Ideas & Plans, Poetry |5comments
၂၀၁၅ မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘေး
မျက်နှာစာအုပ်မှာ မန့်ခဲ့ဘူးတာလေးတွေ ပြန်ဖတ်ရင်း
မျက်ရည် ၀ဲရင်း Live ရေးခဲ့မိတဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ် ပြန်တွေ့လို့
ခု ရွာထဲမှာ လာ ပြ လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
သူကြီးရဲ့ အလှူ အတန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးထားတဲ့ ပို့ နဲ့ပါပေါင်းး
ကျောင်းသားဆိုတာ သေချာတာတခု မိဘနို့သက်ခံဘ၀မျှသာ။
လမ်းဘေးမှာရပ်ရဲခဲ့ပြီ၊ ဒါ ငါတို့အတွက်လုပ်သာမဟုတ်
စာနာစွာ နာကျင်နေသယ့် နှလုံးသားရဲ့စေရာ
လုပ်အားမှတပါး အခြားမရှိ နောင်တော် အမ လူငယ်တွေ
ကျနော်တို့ကိုခိုင်းပါ ရေဘေးလှူချင်လို့ပါ နဲ့ အိမ်မှုကိစ္စ၀ိုင်းလုပ်နေလေရဲ့။
နှစ်လစာလုပ်ခ ငွေတစ်သိန်း ရေဘေးအလှူ ပါပါရစေသယ့်။
အိမ်အပြန်ကားခချန် အပို ငါးရာတန်လေး ပစ်ချပေးခဲ့တဲ့အလုပ်သမားလေး
တယောက် တစု က စ
ကယ်နိုင်သယ့်အားတွေဖြစ်လာ ဒါ မြန်မာ။
နောက် ရင်ဆိုင်ရအုံးမယ့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ကျောင်းသားတွေမှ လက်ဆင့်မကမ်းရင် ဘယ်ဖြစ်လာပါ့မလဲ။
ပြည်သူ့အတွက် စွမ်းအားဖြစ်ပါစေသား။ ။
FB ကတဆင့် တောင်းယူထားခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေ ကြည့်ပါအုံးဗျာ။
မူရင်းပုံများကို ကူးယူတင်ပြခွင့် ပေးခဲ့သော FB Account – Wai Wai ( UCSM မှဆရာမ) နှင့်
ပို့စ်များအား Share ပေးခဲ့သော FB Account – Kaung Thant Lwin တို့ အား ခရက်ဒစ်ပေး မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
သူကြီး ပို့ စ်နဲ့ ဆက်စပ် တွေးလိုက်မိတာက ( အရင်တည်းကလည်း စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာက )
အဲ ဒီ ရွာလေးတွေ ဘာတွေ ဖြစ်နေကြပြီလည်း။
ပုံထဲက လမ်းတွေ အခုကော ဘယ်လို လမ်းမျိုး ဖြစ်လာနေပြီလည်း။
ကောက်ရိုးမီးကြောင့်များ ကြပ်ခိုးတွေ စွဲ မဲကြုတ်များသွားကြပြီလားးး။
has written 61 post in this Website..
The motto of world best British soldiers SAS is " Who dare win ", so dare to face. Try your best for our mother land. OK?
CJ # 1102012
View all posts by Swal Taw Ywet →	Blog
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: ဘီအီးဖိုးလေး ၂ပတ်ချန် ပြန်ထူထောင်ရန်ပေး
Thint Aye Yeik says: သာဓု
ခင်ဇော် says: ပြန်တူးမှပဲ
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ပြန်လည်တူးဆွမှတ်တမ်းကျန်အောင်တင်ပေးတာကောင်းပါလေ့ကိုစွယ်ရေ
အောင် မိုးသူ says: ကလေးတွေ ပရဟိတ စိတ်ဝင်စားလာတာ အရမ်းကောင်းတယ်။